Xukuumada oo ka hadashay weerarkii Hotel SYL | Baydhabo Online
Xukuumada oo ka hadashay weerarkii Hotel SYL
Wasiirka Warfaafinta Xukuumada federaalka Soomaaliya Maxamed cabdi xayir Maareeye oo la hadlay warbaahinta Dowladda ayaa cambaareeyay weerarkii is Qarxinta ahaa ee ka dhacay inta u dhaxeysa Hotel SYL iyo Iridka hore ee Madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo weerarkaas ay ku dhinteen tiro ka badan 20 Qof halka dad ku dhow 50 Qof ay ku dhaawacmeen.
Xilliga weerarka lagu qaadayay Hotelka SYL ayaa waxaa ka socday shir looga hadlayay amniga, sidoo kale waxaa halkaasi ku sugnaa Mas’uuliyiin ka tirsan Labada Gole ee Dowladda Soomaaliya.
Wasiirka War faafinta Xukuumada federaalka Soomaaliya Maxamed cabdi xayir Maareeye ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkaasi, isagoo sheegay in weerarkan ay ku dhaawacmeen Wasiiro, Xildhibaano iyo sidoo kale Wariyeyaal ka tirsan Warbaahinta Dowladda.
Wuxuu sheegay falkan in uu ahaa mid codowtinimo ah oo shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan lagu daadinayo dhiigooda, waxaana uu tacsi u diray dadkii ku geeryoodey Qaraxan halka kuwii ku dhaawacmayna uu u rajeeyay caafimaad deg deg ah.
Qaraxan jugtiisa ayaa waxaa laga maqlay Guud ahaan Degmooyinka Gobolka Banaadir, waxaana bur bur xoogan soo gaaray Dhismaha Hotelka SYL iyo sidoo kale Guryaha halkaasi ka agdhowaa.
Shabaab oo war qoraal ah ku soo qoray baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegteen Mas’uuliyada weerarkan, waxaana ay sheegeen in khasaare ay ku gaarsiiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda.